Isbedelka cimilda iyo biyaha la cabo. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Koob biya ah
Isbedelka cimilda iyo biyaha la cabo.
La daabacay fredag 21 oktober 2011 kl 10.24
Hayadaha dowladda oo ay ku jiraan qeybaha u xil saaran ka warqabka biyaha la cabo iyo cilmi baarayaal ku xeel dheer arrimaha biyaha ayaa hadda ku howlan sidii loo xaqiijin lahaa in biyaha la cabo ee dalka ay noqdaan kuwa nadiif ah mustaqbalka ka dib markii dabaayqadii sanadkii hore tira dad ah ay ku xanuunsadeen biyaha caadiga ee la cabo taasi oo lagu sababeeyay ilaha ay ka yimaadaan biyaha la cabo qaarkood ee dalka oo si u wasaqoobay.
Isbedel ku imaanaya cimilda ayaa la sheegayaa in ay sabab u tahay in wax yeelo aan wanaagsaneen ay ku yimaadaan nadaafadda biyaha la cabo iyada oo sidoo kale webiyada ama harooyinka dalka oo fataha ay qarqin karaan hanaanka ay maraan biyaha wasaqda ee dhulka hoostooda taasi oo sababa karti in ay wasaqoobaan biyaha la cabo.
Thomas Pettersson oo ka tirsan jaamacadda Chamlers ee magaaladda Göteborg in imminka la joogo xilligii wax laga qaban lahaa dhowrida nadaafadda biyaha la cabo
’’ Waxaa la joogaa waqtigeeda dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dad badan oo ku xanuunsaday biyaha la cabo ayaa ah fariin cad, ma jirto sabab aan u fadhino waa in aan deg deg u qaadnaa talloobooyin aan ku dhowreeno nadaagfadda biyaha aan cabno’’ ayuu yiri Thomas.
Hayada dowlada u qaabilsan biyaha ayaa sheegtay si loo ilaaliyo nadaafadda biyaha la cabo loo baahanyahay sharci cad cad iyo in la kordhiyo wacigelinta maamulada degmooyinka dalka ee ah sida loo dhowro ilaha ay ka yimaadaan biyaha.